WICShop डाउनलोड गर्नुहोस् जेपीएमए, इंक
WICShop डाउनलोड गर्नुहोस्
WICShopper WIC लाई सरल बनाउँछ।
WICShopper ले उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जसले तपाइँलाई प्रयोग गर्न WIC सजिलो बनाउनेछ। सबै एजेन्सीहरू समर्थित छैनन् र त्यहि क्षमताहरू छन् त्यसैले अनुप्रयोग स्टोरमा विवरण पढ्न निश्चित हुनुहोस्!
WICShop स्थापना गर्नुहोस्
आफ्नो एप स्टोरमा WICShop को खोज्नुहोस् वा दायाँ तिर छवि ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंको WIC एजेन्सी चयन गर्नुहोस्
कृपया! अनुप्रयोग स्थापना गर्नु अघि तपाईंको एजेन्सी समर्थित छ भनेर सुनिश्चित गर्न एप स्टोरमा विवरण पढ्नुहोस्! यदि यो छैन भने, तपाईं हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ WICShopper@jpma.com पत्ता लगाउन यदि र तपाईंको एजेन्सी समर्थित हुनेछ जब।
तपाइँको कार्ड दर्ता गर्नुहोस्
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सबै एजेन्सीहरूले कार्डहरू दर्ता गर्न सक्दैनन्!
आफ्नो एप स्टोर बाट WICShop डाउनलोड गर्नुहोस्
WICShopper निम्नलिखित राज्यों मा WIC कार्यक्रमों को समर्थन गर्दछ: मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, आयोवा, केंटकी, डब्ल्यू वर्जीनिया, टेक्सास, न्यू मेक्सिको, र विमिंग
आफ्नो WIC कार्ड दर्ता गर्नुहोस्
तपाइँको WIC EBT कार्डको अगाडि 16 अङ्कको नम्बर प्रयोग गरी दर्ता गर्नुहोस्। TX, NM, WY वा OH मा दर्ता सम्भव छैन।
तपाईंको फाइदाहरू हेर्नुहोस्
एकपटक तपाईंले आफ्नो कार्ड दर्ता गरेपछि, तपाइँको वर्तमान फाइदाहरू स्वचालित रूपमा अनुप्रयोगमा डाउनलोड हुनेछ। माफ गर्नुहोस् TX, WY र NM, यो तपाईंको राज्यहरूमा अझै सम्भव छैन!
तपाईंले WIC योग्यता प्रमाणित गर्न पसलका रूपमा उत्पादन स्क्यान गर्नुहोस्। सबै राजमार्गहरूमा, अनुप्रयोगले तपाईंलाई बताउनेछ कि यो WIC योग्य हो। यदि तपाईंको फाइदाहरू डाउनलोड गरिएको छ भने, एपले तपाईंलाई बताउनेछ कि तपाईंको वस्तुको लागि वस्तु तपाईंको लागि योग्य छ भने।
यो वस्तु तपाईंको फाइदाहरूको लागि योग्य हुन्छ!
यो वस्तु होइन
क्षमा गर्नुहोस्, यो वस्तु WIC तपाईंको लागि योग्य छैन।
उत्तर डकोटा WIC
पाक कला मन्त्रालयहरू
सामग्री प्रदायक, स्वास्थ्य सल्लाह, गैर-लाभकारी संगठन
चेसासा SE SETC
धेरै असफल हुन असफल
नेभाडा आईटीसी वि
पुएर्टो रिको WIC
सामग्री प्रदायक, गैर-लाभकारी संगठन
रोड आइल्याण्ड WIC
कोलम्बिया जिल्ला WIC
सामग्री प्रदायक, राज्य एजेन्सी
एरिजोना WIC को ट्राइक काउन्सिल काउन्सिल
न्यू जर्सी WIC
केलगोगको स्वस्थ शुरुआत
सामग्री प्रदायक, स्वास्थ्य सल्लाह
नयाँ मेक्सिको WIC
आयोवा WIC - WICShopper
पश्चिम वर्जीनिया WIC
तपाईंको एजेन्सी सूचीबद्ध छैन? हामीलाई यसको बारेमा थाहा दिनुहोस्।
JPMA अधिक 12 वर्षका लागि WIC कार्यक्रममा संलग्न गरिएको छ। बाट स्वास्थ्य र डब्ल्यूआईसी क्लिनिकमा वा मोबाइल उपकरणहरूमा पोषण शिक्षा सुपरमार्केट चेकआउटमा, हामी अभिनव समाधान प्रदान गर्ने प्रयास गर्छौं जसले WIC कार्यक्रममा सबै सहभागीहरूको उद्देश्यहरू अघि बढाउँछ।